Peace Spring Viaduct na Erzurum nọ n’ọrụ | RayHaber | Zọ okporo ụzọ | Okporo ụzọ | cable ụgbọ ala
HomeTurkeyEastern Anatolia Region25 ErzurumE tinye isi iyi udo Viaduct na Erzurum
08 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 25 Erzurum, Eastern Anatolia Region, General, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Turkey 0
Peace pinari viadugu ọrụ mepere
Otu ọrụ kachasị mkpa nke Erzurum Metropolitan Municipality Peace Spring Viaduct, AK Party Vice Commissioner Chairman .. .. Dr. Numan Kurtulmuş'un gara ememe a mepere iji jee ozi.
E gosipụtara nnukwu mmasị na mmeghe nke nnukwu akụ na-ejikọ Yıl Okporo ụzọ na Şükrüpaşa ma na-enye ezigbo ntụsara njem. Onye isi oche otu AK Party Kurtulmuş, n'okwu ya na emume ahụ, kwusiri ike na ụlọ ọrụ nchekwa. Pasent Ul 70 nke ngwa ọgụ na mgboagha ejiri na Peace Spring Operation bụ nke ụlọ. Turkey bụghị ochie Turkey, 'Hot' Mgbe ị na-ekwu na e nweghị mmalite, Recep Tayyip Erdogan, mmadụ ga-kwụpụ n'akụkụ wee na anyị na-akpụ akpụ na ya siri na-edu ndú, "ka o kwuru. Kurtulmuş kwuru na Erzurum bụ otu n'ime obodo na ebe ewusiri ike nke mgba maka nnwere onwe yana obi dị ya ụtọ inye aha mmeghe 'Peace Spring'. N'ịbụ onye nweere onwe ya, o kwuru, sị: “Oge opupu ihe ubi nke Udo bụ ọrụ dị mkpa. N’ihi na ịnọ n’ala a nwere nnukwu ụgwọ ọrụ. Ala a, anyị na-akpọ ala ndị Anatolia na kọntinent ya, bụ ebe etiti obodo a, ihe akpọrọ Anatolia, Oke Osimiri Mediterenian, Palestine, Iraq na Baghdad kemgbe ụwa. Ha na-eche, 'Turkey n'oge ochie Turkey,' Anyị dere a akwụkwọ ozi azụ ebe ha bụ, anyị na-kwụsịrị na onu, ebe ha bụ ndị ', ma e nwere ihe ha chefuru. Turkey bụghị ochie Turkey. Isi iyi nke Peace Operations ibibi-eyi ọha egwu corridors nke ndapụta iwepụ esemokwu n'etiti ata aru ndị mmadụ, ndị e mere iji gbochie-eyi ọha egwu ebe a site na kpara akwụ abịakọrọ n'ime Turkey si akuku. Emere oge opupu ihe ubi nke Udo mechiri akaụntụ nke ndị chọrọ imegharị akụkọ ha na nkwalite nke ndị nna nna anyị ochie otu narị afọ gara aga. "AK Party Vice President Prof.DDr. Dr. Numan Kurtulmuş, n'okwu ya dịka atomic nke Erzurum Mayor Mehmet Sekmen. Kurtulmuş kwuru, "Ọ bụ ohere dị mkpa na ohere iji nwee ụbụrụ na Erzurum… Canla, anyị maara na ọ na-arụ ọrụ dị ka antom antom. Ka Allah nye ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ. Gọvanọ nke Erzurum na-arụsi ọrụ ike, dị ka atomic ant. N'oge ọchịchị AK Party, enyere gọvanọ anyị na ndị ozi anyị ọrụ dị mma.
EB ike ọrụ dị mkpa… ”
Erzurum Metropolitan Mayor Mehmet Tab si, "Anyị President Mr. Recep Tayyip Erdogan si ndozigharị obibia, nke na-enye obodo ọchịchị na Turkey, ekele ọhụrụ horizons nke ọhụụ echiche nakwa n'ihu anyị agụụ na-agụ, na otuto Anyị bi dị otú ahụ a oge," ka o kwuru. “Ọ bụrụ na echebara oge AK Party echiche, a ga-ahụ nke ahụ; gọọmentị ime obodo enwetala njirimara ha na AK Party, Başkan kwuru na Onye isi oche Sekmen kwuru, sị: “Obodo ime obodo na-ebute ụzọ na ntinye aka na mpaghara gọọmentị nwere ọpụrụiche pụrụ iche na ụdị nke ama ama… Adreesị ụdị ahụ bụ ihe ịrụ ụka adịrị 'AK Party Municipalities'. Ihe ngosiputa nke obodo na ihe ndi mmadu n’ilebara anya na mmepe. Site na nghọta AK Party banyere ọchịchị ime obodo ……
A KARURR Z ZIRZURUM Center Center ”
Mayor Mehmet Sekmen kwuru na Erzurum ghọrọ ebe etiti na-adọrọ adọrọ na ntinye ego enwetara n'obodo ahụ. Onye isi ala Sekmen gara n'ihu dịka a: Erzurum Erzurum, nke abụrụla ebe nlegharị anya na ọrụ anyị na arụpụta na ọrụ anyị na-etolite, na-etolite, na-eto ma na-agbanwe kwa ụbọchị. Dị ka ị chetara, mpaghara a anyị anọworị nwegasịrị ubi na ala tọgbọrọ chakoo oge na-adịbeghị anya…
Ka oge na-aga, ọ torola, zụlite, gbasaa ma bụrụ otu n'ime ogige ndozi kachasị mma nke Erzurum, nke ugbu a ọtụtụ narị puku ndị bi na ya. Agbanyeghị na ọ bụ akụkụ nke etiti obodo, ị ma nke ahụ; ịbanye na mpaghara a siri ike ma sie ike. N'ikwekọ n'ọchịchọ na atụmanya siri ike nke si n'aka gị, anyị, otu anyị ga - esi jikọta Erzurum etiti obodo na mpaghara Şükrüpaşa na nke kachasị mkpirikpi, anyị malitere ịchọ ụzọ ya, anyị na-atụkwa ọrụ a. Site na ọrụ a, ụmụ amaala bi na mpaghara a ga-enwe ohere iru etiti obodo n'oge dị obere. Ọzọkwa, viaduct a agaghị eme ka ọ dịkwuo obere iji ụgbọ njem gafere. N'otu oge Şükrüpaşa ga-eme ka mpaghara anyị mara mma nke ukwuu ma mepụta mpaghara ebe ọhụrụ na-adọrọ adọrọ. Kemgbe anyị malitere ọfịs, anyị na-eme ike anyị niile ịgbakọ, melite ma gbanwee netwọkọ njem na mkpa nke ụbọchị. Dịka ị maara, na ọrụ ọzọ anyị na-eduzi ugbu a, anyị na-ejikọ mpaghara Şükrüpaşa anyị n'ụzọ ụgbọ elu. Na mgbakwunye, anyị mere ihe nnabata bara uru nke ukwuu site na ngalaba mahadum ahụ gaa na ntụziaka nke Yıldızkent ma tinye ya n'ọrụ. Mgbe arụchara ọrụ anyị ebe ahụ, ịnụ ọkụ n'obi mmeghe ọzọ, enwere m olileanya na anyị ga-ebikwa ebe ahụ ọzọ. Na nkenke, anyị na - eme ugbu a, na - emelite, na - edozi ma na - edozi netwọọdụ njem ọhụụ na Erzurum niile. N'ihi na anyị chọrọ ọrụ; Anyị anaghị eche maka ịchebe ụbọchị, anyị na-eche maka ọdịnihu Erzurum na mkpa nke echi. ”Mgbe okwu ndị a gachara, nnukwu mmepe mepere.
Site na Antalya Metropolitan ka Peace Spring Operating…
Ebe a na-azụ ụgbọ okporo ígwè na-arụ ọrụ
Ụgbọala Slammed na Çınara na İzmir